Vaovao - C-kintana 2020 & Jiro Huayuemei
Jiro LED Strip amin'ny ambainy
Vata fahazavana Dynamic
LED Strip malefaka
Bar henjana LED
Famatsiana herinaratra LED
Rafitra hazavana sy haingon-tsaina
C-kintana 2020 & Jiro Huayuemei
C-star - Fetiben'ny varotra iraisampirenena ho an'ny vahaolana sy fironana ao Shanghai Ny momba ny antsinjarany, mpikambana ao amin'ny fianakaviana ara-barotra EuroShop Trade, dia nitombo haingana hatramin'ny nanombohany ny taona 2015 ary nanjary sehatra lehibe mitazona ny indostrian'ny varotra manerana an'i Shina.
C-star 2020 dia notontosaina tamim-pahombiazana tamin'ny 2-4th septambra 2020 tao amin'ny Shanghai New International Expo Center. Nandritra ny telo andro nahombiazana dia niarahaba ireo mpampiranty 134 sy mpitsidika matihanina 9 006 ny C-star.
Ny indostrian'ny varotra sinoa dia nandalo fanovana lehibe noho ny COVID-19 tao anatin'ny volana vitsivitsy. Nahita fahombiazana lehibe tamin'ny ady tamin'ny COVID-19 i Sina. Fotoana mety ho antsika izao hieritreretana ny fomba hiomanana amin'ny manaraka boomHuayuemei Lighting nandray anjara tamin'ity fampirantiana ity. Ireo mpiasa fampirantiana dia nanomana fepetra fisorohana valanaretina amin'ny fampiratiana ihany koa.
Mila misaron-tava ny tsirairay ary mitazona ny elanelam-piarahamonina. Manana iray andro hananganana ny trano rantsan-kazo iray isika. C-star 2020 dia notontosaina tamim-pahombiazana tamin'ny 2-4th septambra 2020 tao amin'ny Shanghai New International Expo Center. Betsaka ny olona mitsidika ny fampirantiana.
Manintona olona maro hitsidika ny trano fivarotanay, satria naseho tao amin'ny trano heva ny RGB Dynamic Curtain LED.
Mampiasa loko ny mpamoron-tsainay mba hanasongadinana ny lohahevitra amin'ity fampirantiana ity, mahasarika ny maso.
Ny tarika backlight Curtain LED Strip rehetra azonay ahena, azo namboarina ihany koa ny mari-pana loko araka ny fangatahanao.
Ny RGB Dynamic Curtain LED Strip no mbola mahavariana indrindra eo amin'ny booth, manintona olona maro hitsidika azy io. Izy io dia mandray protokol DMX512, ary mampiasa ny fifehezana K-8000C ho azo alamina.
Azonao atao ny mamolavola sary mihetsika tianao, ny azonao ampiasaina ny Strip Dynamic Curtain LED mba ho voarindra. Izany dia hahatonga ny booth ho tsara!
Nandray anjara tamin'ny C-star izahay dia misy dikany lehibe amin'ny vanim-potoana nijalian'ny toekarena!
Zava-dehibe tokoa izany amintsika, ampahafantaro anay ny fampahalalana bebe kokoa momba ny Jiro LED, hiezaka ny tsara indrindra izahay hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy hamolavolana vokatra vaovao kokoa.
Andao hapetraka izany ary aza hadino ny fotoana mety anananao amin'ny 2021.
CONSULTATION MAIMAIMPOANA + 86 20 61957708
ADDRESS Fl3., No.3, Erheng Lu, 2. Distrika indostrialy, Jiangnan Cun, tanànan'ny Nancun, distrikan'i Panyu, Guangzhou, Guangdong, 511442, PRChina